Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Doorashada Madaxweynaha K/galbeed Iyo Kulamo Baydhabo
Wararka aan ka helayno Magaalada Baydhabo ayaa Sheegay in ay ka Socdaan olole siyaasadeed oo iska soo horjeeda, kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Dowlad Goboleedka Koofurgalbeed, kaddib Is Casilaadii Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed So
Wararka aan ka helayno Magaalada Baydhabo ayaa Sheegay in ay ka Socdaan olole siyaasadeed oo iska soo horjeeda, kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Dowlad Goboleedka Koofurgalbeed, kaddib Is Casilaadii Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wararka ayaa Sheegaya in Xaalada haatan ay Kacsan tahay, Iyadoona Caawa ay Socdaan Kulamo aan Caadi aheyn oo ay Lee yihiin Siyaasiyiin Labo Garab u kala qeybsan, oo Dhinac doonayo in Doorashada dib loo dhigoo, halka Garabka kalana uu Doonayo in Doorashada Waqtigeeda ay ku Qabsoomto, waxaana garabyadu ay Culeyskoodii isigu geeyeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Cabdulqaadir Sheekhuna Maye.
Odayaasha dhaqanka Koofur galbeed oo maanta Shir Jaraa’id qabtay ayaa ku dhawaaqay inay dib u dhacday Doorashada Koonfur Galbeed, kaddib Markii Fara-gelin cad ay Dowladda Federaalku ku Sameysay, waxaana ka Daba-hadlay Odayaal kale oo Sheegay inaan dib loo dhigi doonin Doorashada oo ay Qabsoomi doonto 17-ka Bisha.
Guddoomiyaha Baarlamaanka koofur galbeed ayaa lagu wadda inuu shir jaraa’id qabto subaxnimada Arbacada ee 7-da bishan, isagoo ka hadli doono go’aanka baarlamaanka ee la xiriira doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed.
Wararku waxaa ay Sheegayaan in Guddoomiyihii uu Shaacin doono in Doorashada Dib loo dhigay, halka Ilo Wareedyo nala hadlay ay tilmaamayaan in Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS uu ku Dhawaaqayo inuu Is Casilay, Iyadoona taas uu culeyska ku saarayo Madaxweyne Shariif Xasan.
Si Kastaba ha ahaatee, Doorashada Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay u Muuqataa mid ay ku Loolamayaan Dowlad Goaleedyada iyo Xisbiyada Siyaasadda Dalka oo isku garab ah iyo Dowladda Federaalka, waxaana ay Tijaabo u tahay Awooda Loolanka Doorashada 2020-ka ee Dalka ka dhacaysa, taas oo Madaxda Dowladda Federaalku ku Haminayaan dib u soo Laabasho iyo in ay Deegaan Walbaa Helaan Awoodiisa si ay u soo saartaan Xubno ay Wataan oo Xildhibaano ah 2020-ka.